arbindaas खेस्रा: कथा-त्यो झरी..........
“म उठेको पन्ध्र मिनेट भईसक्यो ।” मुखमा दाँत माझ्ने व्रसको ठुटो मुखमा कोच्दै उत्तर दिन्छु ।
“म त जान रेडि भैसकेँ ।” म झस्कन्छु ।
“कति हतार रहेछ । यो ठाउँ छोड्न । होइन राति निन्द्रै परेन कि क्या हो ? घर जान भनेसी ?”
“ल । यसो भए त अझ हतार गर्नु पर्यो । अब केही क्षणमा गाडी त हिड्छ ।”
तयार भएर झोलै बोकेर आफ्नो कोठाबाट उ निस्की, मेरो कोठा अगाडी । सायद "मलाई जान्छु" भन्न खोज्दै छे । तर म पनि तयार भएको देखेर सोध्छे ।
“म पनि तपाई सँगै देउराली बसपार्क सम्म जाने ।”
“तपाईको क्यै काम छ कि त्यसै मलाई पुर्याउन जाने ???” बडो अप्ठ्यारो लाग्यो । सायद यो प्रश्न भित्र अर्को प्रश्न लुकेको छ । “तिमी मलाई माया गर्छौ ?” वा यस्तै यस्तै ।
“जाउँला नि । गए पछि केही न केही त काम होला नी ।” यस उत्तरमा “मेरी जुलियट म तिमीलाई माया गर्छु । त्यसैले तिमी सँग छुट्न सक्दिनँ । म तिमिलाई बस स्टेशनको देउराली सम्म पुर्याउन जाँदैछु ।” भन्ने उत्तर लुकेको छ । तर म भन्दा बढी चतुर यी केटीले मेरो कुरा बुझ्या हुन की हैनन् ।
आफ्नै भुतकालका कुरा, परिवार, आफन्त, फलानो तिलानो, आफ्नो करियर आदि कुरा गर्दै दुबै जना अगाडी बढ्छौँ । सायद कसैले देखे भन्नेछन् “वाह क्या मिलेको जोडी ।” अलि पर पुगिसके पछि, “तपाईको काम होला फर्कनु ।” भन्छे । उनको आँखाले भने “आउ आउ” भन्दै थियो सायद । “काम छैन । त्यै भएर त हिँडेको नि । यहाँ एक्लै झ्याउ लाग्छ । त्यसैले देउराली बजार तिर हिडेको । ल तपाई सँग म हिँड्दा अप्ठरो लाग्छ भने तपाई जानुस् म केही बेर पछि आउँला ।”
“होइन होइन । मलाइ पुर्याउनकै लागि हो भने र तपाइृँको यहाँ काम छ भने नजाँदा पनि हुन्थ्यो भनेको ।” उनको एकथअजययिनथ म सजिलै बुझ्छु । Close and Frank साथी भैसकेका हामी तर बेला बेलामा घुर्कि पनि चल्न थालेको थियो ।
अगेरा बगेरा गफ गर्दै बाटो लाग्छौ । देउराली नपुग्दै दर्केर पानी पर्छ उनी झोलाबाट छाता निकाल्छे अनि ओड्छे ।
“तपाई भिज्नुभयो । अव के गर्ने ? अर्को छाता पनि छैन । मैले नआउनुस् भनेको हैन ?” उनी के भन्दैछे ? पानी पर्नु गलत थियो की म उनलाई बस स्टेसन पुर्याउन आउनु गलत म कन्फ्युज भएँ ।
“यो छाता दुबैले ओढ्न नी हुन्थ्यो बाटो साँघुरो छ, तलतिर भिर छ ।” फेरी फतफताईन् । अझ भनौँ घुर्कि देखाईन् । मिठो गफैगफमा आएका हामी पानी परेपछि गफ गर्न सकेनौँ । त्यसैले आधा भन्दा बढी बाटो कटे पनि बाटो धेरै लामो लाग्यो । बल्ल देउराली बजार आईपुग्यो । गाडी जान तयार नै थियो । पुग्ने वित्तिकै उनी गाडी भित्र छिरिन् । म पनि छिरेँ। उनी सिटमा बसेपछी “ल, राम्रो संग जानु होला शुभयात्रा ।” भनेर फर्केँ । फेरी मलाई हेर्दै उनी फतफताईन् “नआउनु भन्दाभन्दै आएर बेकार पानीले चुटेर बिजोक ।” म मुस्कुराउदै गाडीबाट निस्कन्छु । फेरी गाडीलाई फन्को लाउदै उनीबसेको झ्यालनेर पुगेर भन्छु “पुगेपछि फोन गर्नु होला ।”
"ल ल कति पानीमा भिज्न मन लाग्या ? छिटो मास्तिरको पसलमा ओत लाग्नु ।” सायद म भिजे पनि उनलाई चिसोले छोएछ । मेरो पिडामा उनलाई दुख्छ सायद । म पसल घरतिर जादिनँ, किनकि त्यहाँबाट उनलाई देखिन्नथ्यो । म अलिपर गएर उनलाई हेर्दै छु । उनी मलाई हेरेर फेरी इसारा मै गाली गर्दैछे । “पानीमा भिज्नु न । भरे चिसोले गानो नदुखाए त ।” झरी उही दरमा पर्दै छ, तै पनि गाडी अगाडि बढ्यो बिस्तारै । नामै त हो गाडी, बढ्यो अगाडी । म उनलाई बाई बाई गर्दै छु । उनी मलाई हेरेर हाँस्दैछे । म उनको बोली नसुनेनी उनको मुख चलाइलाई बुझ्छु । उनी भन्दैछे “पागल ।” म पनि हाँस्दै “टाटा” गर्दैछु । अहँ उनले “टाटा” गर्न हात हल्लाईनन्, अघि गाडी भित्रै पुगेर सिट सम्म पुर्याएर फर्कदा “धन्यबाद” सम्म भनिनन् । उनी निष्ठुरी हो की वा म धन्यवादको लायक भइनँ सायद । त्यसै त धन्यवाद पनि मगेर लिनुपर्ने ठाउँमा छु । हात हल्लाउनुको साटो उनीले नाक मुख खुमच्याएर मलाई जिस्काईन्, सानो बच्चा झै म छक्क परें ।
अब गाडी बढ्यो साँच्चै अगाडी विस्तारै मेरो मुटुको धड्कन पनि गाडीको वेग संगै बढ्दै थियो सायद । मेरो मुटु भन्दै थियो मलाई “तँलाई उनी संग प्रेम भएछ ।” झरी पहिला भन्दा कम भयो । म यो देउराली बजारमा एकछिन पनि बस्न सक्दीनँ । उनलाई काम छ हुन्छ भने पनि मेरो केही काम थिएन त्याहाँ काम थियो त उनीलाई पुर्याउने र २–४ गफ गर्ने । दिक्क लाग्दै फर्कन्छु बल्ल पो पानीले भिजेको महसुस भयो । यो झरी सायद सधैँ याद रहन्छ मलाई, सायद उनलाई पनि । जब यस्तै झरी पर्छ र म एक्लो हुन्छु गुनगुनाउने छु, यसकुमारको गीत “धेरै बर्षपछि यस्तै झरी पर्यो तिमिलाई नै सम्झेर होकी । हाँस्दा हाँस्दै आँसु झर्यो ।”